Paty sy vovo-tsavony avy any ivelany Manomboka mihena ireo vokatra tonga eto Madagasikara
Ankazomanga-Tsaramasay Anio maraina vao mety hiverina ny jiro
Niaina tao anaty haizina tanteraka ny mponina teny Ankazomanga sy Tsaramasay nanomboka ny talata lasa teo, ary efa nisy ny mponina naneho ny fahasosorany ka nandoro kodiarana teny an’arabe.
Ronono miditra eto an-drenivohitra Mety hisy fitiliana tampoka eny an-dalana
Niharatsy ny kalitaon’ny ronono avy any amin’ny Faritra Vakinankaratra.
Taorian’ny fanapahan-kevitra noraisin’ny minisiteran’ny varotra sy ny ANMCC (Autorité Nationale Chargée des Mesures Corectives Commerciales) ny amin’ny fampiakarana ny hetra alaina amin’ireo entana avy any ivelany toy ny bodofotsy ho 41 %,
ny paty ho 30 % ary vovo-tsavony ho 39 % avy izay tena mitobaka be tokoa eto amintsika dia fantatra izao fa efa manomboka misalasala ireo mpanafatra. Mihena vokatr’izany ireo entana avy any ivelany mitosaka eny an-tsena ka manomboka mahazo vahana ny vokatra vita Malagasy, hoy Atoa Berthelemy, tale jeneralin’ny ANMCC. Efa saika vovo-tsavony sy paty avy eto an-toerana avokoa no hita eny an-tsena izay fantatra fa mbola hiampy ny vokatra avy amin’ireo orinasa roa vaovao indray hisahana ny famatsiana ny tsena anatiny. Raha tsiahivina, tamin’ny 11 aprily lasa teo no nampiharana voalohany ny didim-pitondrana laharana 7094 hoenti-mampiakatra ny hetra alaina avy amin’ireo entana avy any ivelany ireo. Mbola azo aato ihany anefa izany, hoy Atoa Berthelemy raha toa ka misy olana ny famatsian’ireo orinasa Malagasy ny tsena anatiny saingy tsy mbola hita taratra aloha hatreto. Ho an’ireo entana avy any ivelany kosa dia fantatra fa karazana kojakoja miisa efatra ilaina amin’ny fiainana andavanandro indray izao no mampitaraina ireo orinasa Malagasy ka anisan’ireny ny rononomandry mamy izay mitobaka be tokoa.